माओवादी त्यागेका एमाले गण्डकी सह-इन्चार्ज भन्छन् : प्रचण्ड कता गए खोज्नुपर्ने भो ! – Nepal Press
माओवादी त्यागेका एमाले गण्डकी सह-इन्चार्ज भन्छन् : प्रचण्ड कता गए खोज्नुपर्ने भो !
गण्डकीमा एमालेको जिम्मेवारी हेरफेर, सहइन्चार्जमा माओवादी त्यागेका थापा
२०७७ चैत १७ गते १९:३१
पोखरा । संसद विघटनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ छाडेर प्रधानमन्त्रीको साथमा लागेका बागलुङका लीलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशको सह–इन्चार्ज जिम्मेवारी पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टी ब्युँताइदिएपछि पनि उनी नेकपा एमालेमा लागेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन अनुसार नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर भएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार किरण गुरुङ र पद्मा अर्यालसहित उनले पनि सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनी तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समितिसमेत थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थापाले ०५४ देखि ५९ सालसम्म जिल्ला विकास समिति बागलुङको सभापति पद सम्हालेका थिए । पछि ०६३ मा नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।
हालका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग निकट मानिने थापा रायमाझी स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारसमेत थिए । अदालतले पुरानै पार्टी ब्युँताइदिएपछि केही समय अघिमात्रै उनी पूर्व माओवादी लडाकुसहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै छनु् । उनी यसअघि ‘नेकपा’ हुँदासमेत प्रदेश इन्जार्ज नै थिए । नेकपा एमालले गण्डकी प्रदेशको पार्टी अध्यक्षमा जगत विश्वकर्मा र सचिवमा गोविन्द नेपालीलाई नियुक्त गरेको छ ।
फागुन २८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय बैठकले पूर्व खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका विश्वकर्मालाई अध्यक्ष चुनेको थियो । सचिव नेपाली हाल मुख्यमन्त्री गुरुङका राजनीतिक सल्लाहकार छन् ।
नवनियुक्त प्रदेश सह–इन्चार्ज थापाले आफूले पार्टी नछोडेको बरु साथी (प्रचण्ड)हरुले छाडेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू पार्टीमै रहेको र बरु प्रचण्डहरु कता गए गए भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको बताए ।
‘मैले पार्टी छोडेको होइन । बरु साथीहरुले छोडेको हो । हिजो एकता गर्दा हाम्रो प्रथम अध्यक्ष नै केपी ओली भनिएको हो । अहिले हामी पहिलेकै अध्यक्षको साथमा छौं,’ सहइन्चार्ज थापाले भने, ‘बरु प्रचण्ड कता गए खोज्नुपर्नेबेला भयो ?’
‘अहिले मलाई कता गए भन्छन् ? म होइन । पार्टीमा माधव–प्रचण्ड निषेधको प्रवृत्तिमा लगे । त्यो निकै अप्रिय ढंग थियो । पार्र्टी फुट माधव, प्रचण्डको दोष हो,’ थापाले भने, ‘उनीहरुको (माधव–प्रचण्ड)को ध्याउन्न सधैं पदमा मात्रै रह्यो । पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमात्रै रह्यो । संसदीय दल नै कब्जा गर्न लागेका थिए ।’
‘जिम्मेवारीमा आइसकेपछि एउटा व्यक्ति विशेष योजना हुँदैन । हाम्रो गर्ने अभियान समाजका लागि हुन्छ । पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्ने । देश र जनतालाई समृद्धि बनाउने हो,’ उनले भने, ‘योजना नीतिगत र व्यवहारिक हुन्छ । अबको हाम्रो अभियान भनेको राष्ट्रिय अभियानलाई कसरी अघि बढाउने, एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै हो । शोषित वर्गको पक्षमा उभिने नै हो ।’
थापाले आफू अब वैधानिक जिम्मेवारीमा आइसकेकाले पूर्व माओवादी लडाकुको सुरक्षाबारे पनि योजना बनाउने बताए ।
प्रकाशित: २०७७ चैत १७ गते १९:३१